Abhidhamma Society - အဘိဓမ္မာစုဘူး
(အဘိဓမ္မာစုဘူးလေးများကို အဘိဓမ္မာအသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုစိုးပိုင်မှ
ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီးမှ သာသနာတော်ကြီးအတွက် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် တတ်စွမ်းသမျှ လှူဒါန်းထောက်ပံ့နိုင်စေရန်လည်းကောင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆိုသလို ပြုလုပ်ပို့ချပေးနေသည့် အဘိဓမ္မာသင်တန်းများနှင့် အခြားသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပူဇော်ပွဲများတွင် ကြွရောက်ချီးမြှင့်တော်မူကြသည့် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းရာတွင် အစဉ်အဆက် အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်မျှပမာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလည်း နေ့စဉ် အာစိဏ္ဏကံဒါနမှုကို ကြောင့်ကြပင်ပန်းမှုမရှိပဲ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်လျက် အဘိဓမ္မာစုဘူးလေးများကို ခြောက်လတစ်ကြိမ် ပြန်လည်ပို့ဆောင် လဲလှယ်လှူဒါန်းသည့်စနစ်ဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးလျှက်ရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် စုဘူးလေးများအား ပြန်လည်အပ်နှံလဲလှယ်လှူဒါန်းလိုပါလျှင်လည်းကောင်း၊ အသစ်စတင် ဒါနပြုလိုပါလျှင်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် ရယူ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကိုမြင့်ဇော် – 93870335 ၊ မဝါဝါလွင် – 93639546 ၊ မအေးမြတ်သူ – 91450965 ၊ မတင်နီလာထွန်း – 92349435 ၊ မခင်စန္ဒာ – 84666590 ၊ ကိုကွန်းဇော် – 91145705 ၊ မ၀တ်ရည်တင် – 91457576
အောက်ဖော်ပြပါ အလှူရှင်များ၏ ပြန်လည်အပ်နှံလာသော စုဘူးလေးများအားလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံရရှိပါကြောင်းနှင့် သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက် အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်ပမာ အကူအညီ အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအလို့ငှာ လှူဒါန်းပူဇော်ကြပါကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အားလည်း အဘိဓမ္မာအသင်းကြီးမှ ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆို ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါကြောင်း တလေးတစား မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
***ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့လင်းစေသော်***
၂၀၁၈ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
စုဘူးအမှတ် အလှူရှင်အမည် အလှူတော်ငွေ
07/2014-88 ဒေါ်အေးအေးစန်း 70.3
AS072015-055 မမေသွယ်ခင် 32.15
SP042015-034 မောင်မြတ်ကျော်လွင် + မသန်းလဲ့ခိုင် 120.35
AS072015-042 မမေမျိုးဇင် 73.5
AS072015-047 မဇင်မာလွင် 117.45
AS072015-032 မောင်လက်ျာငြိမ်းချမ်း 72.05
AS072015-058 မအေးအေးမြတ်နှင့် သူငယ်ချင်းများ 149.15
SP042015-025 မ၀ါဝါလွင် 69.95
SP042015-024 မခင်ရဲလွင် 94.1
၂၀၁၇ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
AS072015-049 နန်းခမ်းထွန်း 180 22/3/2017
နန်းမိုဟွမ် 150 22/3/2017
AS072015-010 မတင်နီလာထွန်း 195.55 22/3/2017
07/2014-100 ကိုအောင်လှိုင်မျိုး 151.05 22/3/2017
07/2014-97 မအေးမိမိခိုင် 168.95 22/3/2017
မသီရိလှိုင် 140.90 22/3/2017
AS072015-030 မောင်မောင်ဖြိုးနိုင်မိသားစု 36.20
AS072015-011 နန္ဒာခင်ဝင်း 124.70 30/7/2017
AS072015-002 မတင်မော်လှိုင် 78.60
AS072015-059 ဒေါ်မြမြလွင် 123.85
AS072015-013 ကိုရဲဆွေ+မခိုင်မိုးမိုး မိသားစုနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ 409.55
၂၀၁၆ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
101 မစုနှင်းရည် 277.7 20/1/2016
ကိုကျော်ဝဏ္ဏ+မမေကျော့ထွန်း 25.06 17/1/2016
07/2014-030 ကိုကွန်းဇော်ဦး + မဝတ်ရည်တင် 61.15 19/1/2016
07/2014-038 ဒေါ်ယုယုသီ 71.4 21/1/2016
14 ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုနိုင်+ ဇနီး ဒေါ်ခင်ဖုန်းဝေ မိသားစု 208.2 30/1/2016
07/2014-79 ဦးကံဦး + ဒေါ်ရွှေကြည် 60.87 30/1/2016
136 ဦးဝင်းညွှန့်+ ဒေါ်ခင်ပြည့်ပြည့်၊ သမီးမမြတ်မြင့်မိုရ် (မြန်မာစစ်သံရုံး) 55.75 30/1/2016
07/2014-041 မရီရီမြိုင် 120 12/3/2016
07/2014-81 ဒေါ်ခင်မြ 123.05 16/02/2016
No.96 စေတနာရှင် 111 16/02/2016
NA ကိုစိုးပိုင် 123.2 16/02/2016
07/2014-003 ရွှေဖြူ သင်း 121.75 16/02/2016
07/2014-040 ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် 50 16/02/2016
07/2014-80 ကိုမြတ်ကျော်လွင် + မသန်းလဲ့ခိုင် 121.5 26/06/2016
SP042015-022 ကိုနိုင်မိုးနှင့် သူငယ်ချင်းများ 53.75 26/06/2016
SP042015-006 စေတနာရှင် 59.25 26/06/2016
SP042015-011 စေတနာရှင် 6.9 26/06/2016
SP042015-009 မောင်လက်ျာငြိမ်းချမ်း 61.8 26/06/2016
07/2014-95 ဦးမြင့်စိုး+ဒေါ်ခင်စန်းယု မိသားစု 116.1 26/06/2016
SP042015-030 မတင်မာအေး 286.95 28/08/2016
စေတနာရှင် 8.3 28/08/2016
28/08/2016 မမျိုးသီရိ 68.5 06/10/2016
ကိုမင်းထွဋ်အောင် + မနှင်းဝေအောင် 225 06/24/2016
07/2014-93 မဇင်မာအောင် 397.45 06/24/2016
SP042015-033 Ko Soe Paing 149.35 28/8/2016
07/2014-050 Ma Khin Malar Thein 47.8 9/10/2016
SP042015-031 Ko Zaw Min Than+Ma Thida Hlaing 20 1/4/2016
၂၀၁၅ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
07/2014-020 မမေဇင်အေးနှင့်အဖွဲ့ 66.59 20/02/2015
07/2014-034 စိုးစိုးအေး 232.05 20-Feb-2015
131 ကိုကွန်းဇော်ဦး + မဝတ်ရည်တင် 41.70 20-Feb-2015
07/2014-001 မအေးအေးမြင့် 183.40 22-Feb-2015
07/2014-029 မအေးမိမိခိုင် 131.15 28-Feb-2015
54 မသူဇာသိန်း 65.40 28-Feb-2015
မနန္ဒာထွန်း 103.55 02-Mar-2015
109 ကိုဝိုင်းအောင်+မဆုရည်မွန် 152.40 02-Mar-2015
07/2014-044 မဆွေဇေဇေထက် 210
07/2014-043 ကိုရဲကျော်သူ 90 27/10/2015
113 မသီရိလှိုင် 121 27/10/2015
07/2014-023 မတင်မာအေး 214 27/10/2015
07/2014 – 069 ကိုကျော်စွာဟိန်း 274.05 6/12/2015
07/2014-015 မနှင်းယုလှိုင် 100.8 12/11/2015
07/2014-009 မကြည်မေဦး 161.2 12/11/2015
07/2014-007 မအေးသီတာသန့် 49.7 12/11/2015
မနီနီလှိုင် 48.5 12/15/2015
SP04205-004 မနွယ်နွယ်ခိုင် နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်စု 34.25 12/12/2015
ကိုဇော်မင်းသန်း + မသီတာလှိုင် 15 16/12/2015
07/2014-077 မတင်တင်အေး 161.96 26/12/2015
104 မနီလာခိုင် 71.35 27/12/2015
07/2014-014 ကိုစည်သူ၊မနန္ဒစုလှိုင်၊မချိုနွယ်စုလှိုင် 319.75 27/12/2015
၂၀၁၄ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
122 ဦးမြင့်စိုး+ဒေါ်ခင်စန်းယု မိသားစု 101.90
123 မအေးဆုမွန် 24.15
125 မခိုင်ပြည့်စုံလွင် 46.55
132 မနှင်းအိခိုင် 278.75
117 စေတနာရှင် 2.10
35 မနီလာခိုင် 56.00
49 မနီလာခိုင် 44.75
127 နန်းလွင်လွင်ငြိမ်း 121.15
84 စေတနာရှင် 56.30
ကိုစိုးရန်မင်း + မဖြူမွန်သန့် သားလေး မောင်မင်းသန့်ဦး 102.95
07/2014-010 မခင်ရဲလွင် 75.95
07/2014-003 ကိုဇော်မင်းထွန်း + မဆုနှင်းရည် 44.75
06/2014-005 ကိုဇော်ရဲလင်း 60.00
122 ကိုမြတ်ကျော်လွင် + မသန်းလဲ့ခိုင် 122.80
10 မသီတာလှိုင် 31.20
13 မခင်ငုဝါ 28.40
07/2014-027 ဆရာတော် ဦးဉာဏဝရ (ပညာပါရမီ) 192.55
ကိုမင်းထွဋ်အောင် + မနှင်းဝေအောင် 121.00
ဦးနေဝင်း + ဒေါ်အိမ်မြ ၊ သမီးမမေဖြူစင် 60.00
07/2014-031 မမြင့်မြင့်ကြည် 89.65
07/2014-012 ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုနိုင်+ ဒေါ်ခင်ဖုန်းဝေ မိသားစု 121.75
66 ကိုပြည့်စုံထိုက် 20.10
07/2014-016 ဦးထွန်းဝင်း + ဒေါ်ကြနန်း 30.65
07/2014-033 မြန်မာစစ်သံမိသားစု 35.70
07/2014-021 မြန်မာစစ်သံမိသားစု 29.05
128 ဒေါ်တင်တင်မြင့် 116.20
07/2014-004 မခင်နီလာဝင်း 24.00
07/2014-008 မအိကေဖြိုး 84.25
07/2014-006 မလှိုင်မေသန်း 164.00
07/2014-026 မခင်ဝါဝါ 119.00
07/2014-047 မဝင်းသန္တာ 53.85
07/2014-002 မချိုမာအေး 53.70
124 မနန်းခင်ထွေး 65.00
07/2014-025 မမေသူထက် 416.00
119 မ၀ါဝါလွင် ၊ မခင်ရဲလွင် 105.40 9-Jan-2014
၂၀၁၃ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
9 ဦးအံ့ထူးနိုင်+ မနှင်းယုလွင် 211.95 21-Aug-2013
22 Ma Khin Hnin Hnin Lae 44.45 9-Feb-2013
27 Ma Kyi Kyi Than 229 9-Feb-2013
62 ကိုကွန်းဇော်ဦး + မ၀တ်ရည်တင် 62.90 11-Sep-2013
55 ဦးခင်မောင်အေး+ဒေါ်မြမြလွင် မိသားစု 137.60 6-Aug-2013
ကိုညီညီထွေး 150.35 9-Feb-2013
နန်းယိမ်းယိမ်းတင့်ဆွေ 180.35 9-Feb-2013
မတင်မျိုးသူဇာ မိသားစု 50 9-Feb-2013
မချောပြည့်ဝင်း မိသားစု 50 9-Feb-2013
ကိုဉာဏ်စိုးနှင့် သူငယ်ချင်းများ 143.30 24-Jul-2013
ကိုမင်းထွဋ်အောင်+မနှင်းဝေအောင် 43.45 24-Jul-2013
130 မခင်နေခြည်သွင် 332 2-Sep-2013
၂၀၁၂ – ခုနှစ် အလှူရှင်များစာရင်း
2 U Myint Thein 41.65 31-Dec-2012
3 Ko Soe Paing 120 31-Dec-2012
4 Ma Khin Sandar 79.80 31-Dec-2012
8 Ma Khin Ye Lwin 53.85 31-Dec-2012
14 Ko Maung Mhat 45.70 31-Dec-2012
16 Ma Cho Mar Zin 38.25 31-Dec-2012
18 Ma Khin Than New 67.80 31-Dec-2012
19 ဦးခင်မောင်အေး+ဒေါ်မြမြလွင် မိသားစု 108 31-Dec-2012
24 Nan Khin Htwe and Friends 130.85 31-Dec-2012
25 U Thint Lwin + Daw Khin Khin Lay 28.30 31-Dec-2012
26 Ko Soe Paing 115.15 31-Dec-2012
28 Ko Pyit Sone Htite 40 31-Dec-2012
30 Ko Min Zin Oo and Friends 218 31-Dec-2012
32 Ma Thuzar Thein 215.05 31-Dec-2012
33 Ma Nang Yae Won Pyi 35.35 31-Dec-2012
34 Zinmar Win Swe 38.25 31-Dec-2012
36 ကိုကွန်းဇော်ဦး + မ၀တ်ရည်တင် 84.55 31-Dec-2012
38 Ko Zaw Myo Tun 54 31-Dec-2012
39 Ma Tin Tin Cho 46.60 31-Dec-2012
42 အင်ကြင်းမေ 97.45 31-Dec-2012
44 Ko Soe Paing 63.70 31-Dec-2012
47 Ma Nilar Khaing 78.25 31-Dec-2012
59 Ma Khin Hteik Tin 131.25 31-Dec-2012
65 Htet Htet Phyo (U Kan Nyunt + Daw Saing) 183.10 31-Dec-2012
To view the donation list on Facebook, please click here.
To view the donation list in Excel Format , please click here.
By abhidhamma|2018-01-06T21:49:38+00:00October 14th, 2013|ဓမ္မဒါန|0 Comments
About the Author: abhidhamma
Archives Select Month February 2018 (2) January 2018 (3) October 2017 (1) June 2017 (1) May 2017 (3) March 2017 (1) February 2017 (1) January 2017 (3) November 2016 (1) October 2016 (2) September 2016 (1) August 2016 (1) July 2016 (6) May 2016 (2) March 2016 (2) February 2016 (3) December 2015 (1) October 2015 (3) August 2015 (1) April 2015 (1) February 2015 (3) January 2015 (1) May 2014 (1) October 2013 (4) May 2013 (1) March 2013 (2) January 2013 (6) November 2012 (3) October 2012 (16) June 2011 (38) May 2011 (11) April 2011 (6)
Dhamma News (2)
Projects (Ongoing) (17)
Abhidhamma Apps (1)
Audiobooks Project (16)
ရက်တို ဓမ္မသင်တန်းများ (11)
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) (8)
အလွတ် သင်ယူလေ့လာခြင်း (5)
Copyright © 2011 - 2018 Abhidhamma Society | All Rights Reserved.